Iraniana Mpiaro Ny Zon’ny Sivily: Manohy Ny Fitokonany Tsy Misakafo, Manohitra Ny Nisamborana Ny Vadiny Noho Ny Fanoratana Tantara An’eritreritra · Global Voices teny Malagasy
Iraniana Mpiaro Ny Zon'ny Sivily: Manohy Ny Fitokonany Tsy Misakafo, Manohitra Ny Nisamborana Ny Vadiny Noho Ny Fanoratana Tantara An'eritreritra
Voadika ny 02 Janoary 2017 6:54 GMT
Arash Sadeghi sy Golrokh Ebrahimi Iraee, niaraka talohan'ny nisamborana azy. Sary nozaraina be tao amin'ny haino aman-jery sosialy.
Nahatratra ny teboka faratampony ny fanentanana hamonjena ilay mpiaro ny zon'ny sivily Arash Sadeghi. Tao anatin'ny roa volana nanaovany fitokonana tsy misakafo, maro no manahy hoe ambivitra ny ain'i Sadeghi ao am-ponjan'i Evin ao Iràna.
Nandritra ny 67 andro i Sadeghi no nanao fitokonana tsy misakafo, nanomboka tamin'ny volana fahefatra nanefàny sazy tany am-ponja raha nogadraina noho ny antony tsy mazava mikasika votoatinà tantara iray noforonina tsy natonta i Golrokh Ebrahimi Iraee vadiny .
Manefa sazy 15 taona an-tranomaizina i Sadeghi, nampangaina noho ny “fivoriana sy ny tsikombakomba manohintohina ny filaminam-pirenena,” “fampielezan-kevitra manohitra ny fanjakana”, “fanelezana lainga amin'ny aterineto”, ary “fanompàna ny mpanorina ny Repoblika Islamika”.
Tao amin'ny resadresaka niarahana tamin'ny Fanentanana Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'Olombelona any Iràna (ICHRI) tamin'ny volana Martsa lasa teo, nanazava ny fisamborana azy toy izao i Sadeghi:
Nampangaina ho ‘nitsikombakomba manohintohina ny filaminam-pirenena’ aho satria nanohana vondronà mpianatra mahantra izay nolavina tsy nomena fanabeazana ary nanohana mpianatra avy amin'ny hery ankavia sy namangy ny fianakavian'ireo izay novonoina, ary nandray anjara tamin'ireo famoriam-bahoaka am-pilaminana, toy ny…hetsi-panoherana manohitra ny famonoana an'i Gholamreza Khosravi ary famoriam-bahoaka ho fanohanana an'i Narges Mohammadi [mpikatroka ho an'ny zon'ny vehivavy migadra].
Nosamborina tamin'ny 24 Oktobra ny vadiny, rehefa nanao bemidina tao an-tranony ny manampahefana, ary nisambotra azy noho ny nanoratany tantara noforonina izay tsy mbola nivoaka akory momba ny fitoraham-bato any Iràna. Manaraka ny valinteny mampihetsi-po nataon'ny tovovavy iray mijery ilay horonantsary Ny nitoraham-bato an'i Soraya, izay milaza ny tantara tena marin'ny vehivavy notoraham-bato ho faty noho ny fijangajangana ny tantara. Ahitana ny fandoroana ny dika mitovin'ny Korano ny valinteniny. Hitan'ireo manampahefana ny vakiraokan'ny tantara fony izy ireo nisambotra an'i Sadeghi sy Iraee tamin'ny 2014.
Endriky ny sazy henjana indrindra any Iran ny fitoraham-bato ho faty, matetika ampiasaina ho an'ny vehivavy voaheloka noho ny fijangajangana. Nahatonga resa-be maneran-tany sy ao Iran ity fampiharana ny fitoraham-bato ao Iran ity rehefa niteraka hatezerana tamin'ny 2010 ao amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny raharahan'i Mohammadi Ashtiani izay naely be, vehivavy nohelohina ho faty amin'ny alalan'ny fitoraham-bato noho ny fijangajangana. Nilefitra tamin'ny fanerena i Iran tamin'ny farany ary namotsotra an'i Ashtiani tamin'ny 2014.
Nanazava i Iraee nandritra ny resaka amin'ny ICHRI tamin'ny Oktobra lasa teo:
Notazonina ireo tantara sy tononkaloko tamin'ny alina nisavàn'ny mpitandro filaminana ny tranonay. Taorian'ny andro fahatelon'ny fakàna am-bavany, nanery ahy ireo mpanadihady ary niampanga ahy ho nanompa ny masina. Im-polokely aho no nanontaniana momba ny fandorana ny Korano ao anatin'ny tantarako. Manazava hatrany aho: tantara fotsiny izany. Nolazaiko azy ireo ary nosoratako [ao amin'ny fanambarako ho fiarovako ny tenako] fa raha heloka bevava izay nataoko, dia maro ny mpanoratra tantara sy mpanoratra boky no tokony ho samborina noho ny fanaovan'izy ireo izany heloka bevava mitovy amin'ny ahy izany. Fa tsy norarahian'izy ireo, ary tamin'ny farany nomen'izy ireo ahy ny sazy ambony indrindra.
Nozaraina be tao amin'ny haino aman-jery sosialy eo ambanin'ny tenifototra #freeGolrokh, #freeArash, #saveArash ny sarin'ny toedraharaha ratsy misy an'i Sadeghi .
Anatinà Toedraharaha “Mampiahiahy sady Mampahatahotra” i Arash Sadeghi Taorian'ny 64 Andro Nanaovany Fitokonana Tsy Misakafo Ao Amin'ny Fonjan'i Evin Any Teheran #SaveArash pic.twitter.com/vnKj3qonfM
Nozaraina be dia be tao amin'ny haino aman-jery Sosialy ny antso avo ho an'ireo manampahefana Iraniana mba hijery ny toedraharaha ratsy misy an'i Sadeghi.
Atahoran'ireo mafana fo fa mety hamoy ny ainy ilay mpikatroka migadra, Arash Sadeghi, manao fitokonana tsy hisakafo nandritra ny 2 volana ao Iràna. Hihetsika ve i @HassanRouhani? #saveArash
Zarao, avereno bitsihana indray ary mariho any anatin'ny hafatrao any amin'ny haino aman-jery sosialy ireo politisiana ao amin'ny misy anao sy ireo Iraniàan mpanao politika, amin'ny fampiasana ny tenifototra #SaveArash (vonjeo i Arash)
Manaova hetsika miaraka amin'ny Amnesty International
Fantaro bebe kokoa ny momba ny vokatry ny fitokonana tsy misakafo amin'ny fahasalaman'ny olona iray, amin'ny fijerena ny vokatr'izany miaraka amin'ity kisary ambany ity novokarin'ny Visualizing Impact